Public Health in Myanmar: April 2012
Cocaine (ကိုကင်း) နဲ့ Marijuana ဆေးခြောက်လို တရားမဝင်ဆေးတွေကိုသာ မဟုတ်ပါ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ် ဝယ်လို့ရတာတွေရော ဆရာဝန် လက်မှတ်နဲ့သာ ဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေကိုပါ တလွဲနေရာတွေမှာ သုံးနေကြတယ်။ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ဆေးတွေကလဲ ပုံစံမတူတာတွေ၊ အရောင်နဲ့ အရွယ်အစား ကွဲပြားတာတွေ ရှိတယ်။ 1. Barbiturates (ဘာဘီကျူရိတ်) Depressant စိတ်မကျဆေး အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ စိုးရိမ်စိတ်နည်းစေတယ်။ အိပ်စေတယ်၊ စိတ်ကျတာလဲ နှေးစေတယ်။ ဦးနှောက် အလုပ်တွေကို နှေးကွေးစေတယ်။ Phenobarbital, Mebaral, Seconal, and Nembutal တွေဖြစ်ကြတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်တာ ရောဂါသက်သာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးစွဲစေနိုင်တယ်။ အရက်နဲ့တွဲရင် နှလုံးနဲ့ အဆုပ် အလုပ်တွေကိုပါ နှေးစေတယ်။ လွန်သွားတာနဲ့ အသက်သေစေနိုင်တယ်။ အရပ်သုံးအခေါ်တွေကတော့ Barbs, Reds, Red birds, Phennies, Tooies, Yellows, Yellow jackets တွေဖြစ်တယ်။ 2. Benzodiazepines (ဘင်ဇိုဒိုင်ယာပင်း) Valium (ဗေလီယမ်) နဲ့ Xanax (ဇာနက်စ်) ကို လူသိများတယ်။ Depressant စိတ်မကျဆေး အမျိုးဆေးဘဲဖြစ်တယ်။ Anxiety စိုးရိမ်စိတ် များတာ၊ Acute stress reactions ရုတ်တရက် စိတ်ဖိအား တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲတာ၊ Panic attacks ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်တာ၊ Convulsions တက်တာ နဲ့ Sleep disorders အိပ်မပျော်တာတွေအတွက် ပေးတယ်။ ဆေးစွဲနိုင်သလို ဆေးဖြတ်တဲ့အခါ ခံစားရမှာတွေလဲ ရှိတယ်။ အသက်ကိုတော့ ရန်မရှာပါ။ 3. Sleep Medicines အိပ်ဆေး အိပ်ဆေးဆိုတာလဲ Depressants စိတ်မကျဆေးမျိုးဘဲဖြစ်တယ်။ Ambien, Sonata, and Lunesta တွေက နောက်ပေါ် အိပ်ဆေး Nonbenzodiazepines လို့ခေါ်တယ်။ ဆေးစွဲတာ မဖြစ်တတ်ပါ။ 4. Codeine and Morphine (ကိုဒင်း) နဲ့ (မော်ဖင်း) Pain relievers အနာသက်သာဆေး အပြင်းစားတွေဖြစ်တယ်။ Morphine ကို Avinza, Kadian, MS Contin, Oramorph, and Roxanol နာမည်တွေနဲ့ ရောင်းတယ်။ Miss Emma အတိုကောက် M လို့ ခေါ်ကြတယ်။ Codeine ကို Captain Cody နဲ့ Cody ခေါ်တယ်။ 5. OxyContin (အောက်စီ-ကိုတင်) OxyContin, Percocet, Percodan, Roxicodone ဆေးတွေထဲမှာ Oxycodone ပါတယ်။ ဘိန်းကနေထုတ်တာ ဖြစ်တယ်။ Pain reliever အနာသက်သာဆေး အပြင်းစားဖြစ်တယ်။ Percocet ထဲမှာ Acetaminophen (ပါရာစီတမော) လဲပါတယ်။ Percodan ထဲမှာ Aspirin (အက်စ်ပရင်) လဲပါတယ်။ OxyContin ကို Oxy, O.C ခေါ်တယ်။ Percocet or Percodan ကို Percs စသဖြင့် ခေါ်ကြတယ်။ 6. Vicodin (ဗီကိုဒင်) Vicodin, Lortab နဲ့ Lorcet တွေထဲမှာ Opioid hydrocodone ဘိန်းနဲ့တူတာ နဲ့ Acetaminophen (ပါရာစီတမော) တွေပါတယ်။ Drowsiness အိပ်ချင်မယ်၊ Constipation ဝမ်းချုပ်မယ်၊ Depress breathing အသက်ရှူတာကို ဆန့်ကျင်တယ်။ Vike, Watson-387 စသဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ 7. Amphetamines (အင်ဖတမင်း) Stimulants စိတ်ကြွဆေးဖြစ်တယ်။ သတိ-အသိ ပိုကဲနေမယ်၊ အားအင်ပိုသုံးနိုင်မယ်။ Narcolepsy (နာကိုပလက်စီ) ရောဂါ နဲ့ Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ပတ်ဝန်းကျင် သတိမမူ ရောဂါတွေမှာ ပေးတယ်။ Depression စိတ်ကျနေသူတွေကို တခြားဆေးနဲ့ မရရင်လဲ ပေးတယ်။ ADHD ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Dexedrine နဲ့ Adderall တွေကို Euphoria ပီတိစိတ်၊ ကောင်းတာတွေချည်း ထင်မြင်နေစိတ်ရစေဘို့ တလွဲသုံးကြတယ်။ Fast or irregular heartbeat နှလုံးခုန်ုတာ အတင်းမြန်မယ်။ မမှန်ဖြစ်မယ်။ Reduced appetite စားချင်စိတ်မရှိဖြစ်မယ်။ Heart failure နှလုံး အလုပ်မလုပ်ဖြစ်မယ်။ Nervousness ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်။ Insomnia အိပ်မပျော်ဖြစ်မယ်။ Addiction ဆေးစွဲမယ်။ Bennies, Black beauties, Speed လို့ ခေါ်ကြတယ်။ 8. Methylphenidate (မီသိုင်းလ်-ဖင်နီဒိတ်) Stimulants စိတ်ကြွဆေးဖြစ်တယ်။ ADHD ရောဂါဆေး Ritalin, Concerta, Metadate, and Methylin တွေမှာပါတယ်။ MPH, R-ball, Skippy, The smart drug, Vitamin R လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ကိုယ်အပူချိန် အများကြီး တက်လာစေမယ်။ နှလုံးခုန် မမှန်ဖြစ်မယ်။ သေစေနိုင်တဲ့အထိ တက်နိုင်တယ်။ 9. Dextromethorphan (DXM) (ဒီ-အိတ်စ်-အင်မ်) Cough and cold medicines အအေးမိနဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေထဲမှာပါတယ်။ ဆရာဝန် ပေးသလောက်သုံးတာ ကိစ္စမရှိပါ။ များသွားရင် Impaired judgment ဆုံးဖြတ်ချက်ချ မမှန်တာ ဖြစ်မယ်။ Euphoria ပီတိစိတ်၊ ကောင်းတာတွေချည်း ထင်မြင်နေစိတ်ဖြစ်မယ်။ ပျို့-အန်မယ်။ Loss of coordination ထိန်းညှိမှုမရတာ ဖြစ်မယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ ဒီဆေးကို Orange Crush, Triple Cs, Dex, Robo, Skittles လို့ ခေါ်တယ်။ 10. Pseudoephedrine (ဆူဒို-အဖက်ဒရင်း) Cold medicines အအေးမိ သက်သာဆေးတွေထဲမှာ ပါတယ်။ တရားမဝင်ဆေး Methamphetamine (Meth) (ရာဘ-ယာဘ-ရာမ-ယာမ) ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒါသုံးတယ်။ 11. Spasmo-Proxyvon (စပတ်စမို-ပရောက်စီဗွန်) Dicyclomine hydrochloride (10 mg) + Acetaminophen (400 mg) + Propoxyphene Napsylate (100 mg) ပါတယ်။ အနာသက်သာဆေး ဖြစ်တယ်။ သိပ်အပြင်းစားတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘိန်းသဘောပါလို့ သုံးစွဲတာ များသူတွေမှာ ဖြတ်ရတာ ခက်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဒီဆေး အပြား-အတောင့်ကို တနေ့မှာ ဘယ်နှစ်တောင့် သောက်တယ်။ နှစ်ဘယ်လောက်ကြာပြီ စသဖြင့် သိရတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာတော့ “ရွှေ” တွေက အနောက်နိုင်ငံသားတွေထက် ထူးခြားတယ်။ ဆေးတောင့်ကိုဖေါက်၊ အမှုံ့ကိုထုတ်၊ ရေ-ဆေးထိုးမိုးရေနဲ့ ဖျော်ပြီး အသားထဲ၊ သွေးကြောထဲ၊ အရေပြားထဲ ထိုးကြတယ်။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာ အနာတွေဖြစ်လို့၊ သွေးပြန်ကြောတွေ ရောင်လို့ ဆေးခန်း လာကြတယ်။ ဆေးဖျော်တာက (ခိုင်နီး) ဗူးခွံကို သုံးသတဲ့။ ဒူးကောက်ကွေး၊ ပေါင်ခြံနေရာတွေမှာ ထိုးတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပညာပေးသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Dr. တင့်ဆွေ ၁ဝ-၄-၂ဝ၁၂